Dagaalka U Dhaxeeya Sadio Mane & Mohamed Salah Oo Sharaxaad Laga Bixiyay & Mane Oo Lagu Eedeeyay Inuu Rigoore U Diiday Salah Xalay | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDagaalka U Dhaxeeya Sadio Mane & Mohamed Salah Oo Sharaxaad Laga Bixiyay & Mane Oo Lagu Eedeeyay Inuu Rigoore U Diiday Salah Xalay
Dagaalka U Dhaxeeya Sadio Mane & Mohamed Salah Oo Sharaxaad Laga Bixiyay & Mane Oo Lagu Eedeeyay Inuu Rigoore U Diiday Salah Xalay
Xiriirka Mohamed Salah kala dhaxeeya Sadio Mane ma ahan mid fiican, waxaana dhaawacday in la bedelay kulankii ay Liverpool guuldarada ka soo gaartay Chelsea xalay.
Sidaasi waxaa sheegay xiddigii hore ee Man City Trevor Sinclair kaasoo carabka ku dhuftay in dagaalka u dhaxeeya labada nin uu mar walba taagnaa laakiin haatan uu banaanka u soo baxay madaama kooxda ay wajaheyso natiijooyin xun xun.
Sidoo kale Michael Owen ayaa soo jeediyay in Sadio Mane oo qalad lagula kacay xerada ganaaxa Chelsea inuu istuurin isagoo hore u sii turaan turooday si uu uga ilaaliyo in Mohamed Salah uu helo rigoore kale.
Liverpool ayaa ku guuldareysatay inay xitaa hesho hal darbo oo goolka ku bartilmaameedsan qeybtii hore ee kulankii ay guuldarada 1-0 kala kulmeen kooxda Chelsea.
Sinclair ayaa sharaxaad ka bixiyay inay dhibaato dhex taalo Salah iyo Mane.
Wuxuu yiri: “Waxaan dareemayaa inay dhibaato weyn dhex taalo Salah iyo Mane. Mane waa xiddig kooxda la ciyaara halka Salah uu naftiisa u dheelo, taas ayaana dhibaato ku aheyd xiriirkooda in muddo ah.
“Dagaalkooda banaanka ma uusan oolin laakiin madaama haatan cadaadis uu jiro islamarkaana ay wajahayaan natiijooyin xun xun wax walba banaanka ayay u soo baxeen. Xaqiiqdii dhibaato weyn ayaa dhex taala labada ciyaaryahan.”
Sinclair kaliya ma ahan qofka soo jeediyay in dagaal qabow uu ka dhaxeeyo Mane iyo Salah.
Weeraryahankii hore ee Liverpool Michael Owen ayaa soo jeediyay in Mane uu doortay inuusan dhulka isku tuurin isagoo xerada ganaaxa Chelsea ku jira islamarkaana la lagday si uu uga ilaaliyo in Salah uu helo rigoore uu dhaliyo.
“Waxaa jirta dhacdo dhacday qeybtii hore oo taageero walba oo Liverpool ah uu ku fekerayay inay aheyd rigoore – Waa aamini waayay inuusan dhulka isku tuurin” ayuu Owen u sheegay Optus Sport/
“Uguma baaqayo inuu sidaas sameeyo laakiin caadiyan waxaan aragnaa weeraryahanada oo dhulka isku tuura… waxaan kaliya isweydiinayaa muxuu ku fekerayay…. ma wuxuu is lahaa ‘Haddii aanan cagteyda ku istaagin oo aan anigu dhalinin goolka, Mo Salah ayaa helaya rigoore kale.’
“Dhamaanteen waan ognahay sida ay u tartamaan labadaan weeraryahan. Dhamaanteen waan ognahay sida gooldhaliyayaasha ay u yihiin kuwa naftooda kalioya ka fekera. Ciyaartoydaan waxay u tartamayeen kabta dahabka xilli ciyaareedyadii ugu danbeeyay.